ओछ्यानको विचारहरू जुन छत, भित्ता वा भित्र क्याबिनेटमा लुकाउँछन् सजाउनुहोस्
सुसाना Godoy | | शयनकक्षहरू, फर्नीचर
एक छ सानो घर, धेरै को लागी एक उपद्रव हुन सक्छ। हामी जहिले पनि ठूला ठाउँ र विशाल सजावटको सपना देख्छौं जुन आधुनिक समयमा र प्रत्येक कुनामा फर्निचरसहित। ठिक छ, जब हामी आफैंलाई सानो घर संग भेट्छौं, हामीले हाम्रो सपना त्याग्नु पर्दैन।
हामीले ती अधिक वास्तविक फर्निचरको सहारा लिनुपर्दछ, जसले हामीलाई जीवनको उत्तम गुण प्रदान गर्दछ। को कोठा सिर्जना गर्न उत्तम समाधानको साथ लुकाइएको बेडहरू तपाईले चाहानु भएको घरको भागमा। दिनको समयमा तिनीहरू लुकेका रहनेछन् र राती बाहिर आउनेछन्, पूर्ण विश्रामको लागि।
1 बेडहरू जुन छतमा लुकाउँछन्
2 बेडहरू जुन भित्तामा लुक्दछ
3 के Ikea को खाट छ कि लुक्छ?
4 लुकेका ओछ्यानहरू कहाँ राख्ने?
5 बेडका केही मोडेलहरू जुन लुक्छन्
बेडहरू जुन छतमा लुकाउँछन्
यदि तपाईं पहिले नै यो विचारको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ तर यो कहाँ राख्ने भनेर थाहा हुनुहुन्न भने, तपाईं छतको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? हो, प्राथमिकता यो केहि अजीब विचार हुन सक्छ, तर तपाइँले यसलाई देख्ने बित्तिकै यसलाई मनपर्नुहुनेछ। को छतमा पलंग तह तिनीहरूले हाम्रो कोठा को ठाउँ कुनै पनि फर्निचर द्वारा डराउनु हुँदैन। यस प्रकारको ओछ्यान प्रत्येक कोठाको माथिल्लो भागमा इम्बेड हुनेछ। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुन, तिनीहरूसँग स्टील केबलि system प्रणाली छ, साथसाथ गाईडहरू छन् जसले यसलाई सजिलो र सुरक्षित बनाउन काम गर्दछ।
अर्को बेडका फाइदाहरू जुन छतमा लुकेका छन्, के यो हो जब तपाईं तिनीहरूलाई तल, तिनीहरू भुइँमा पुग्न छैन। तसर्थ, यदि तपाईं दिन कोठामा खाना खाने कोठाको रूपमा कुर्सीहरू भएको टेबल, वा कार्य तालिका छ भने, तपाईं यसलाई ठाउँमा छोड्न सक्नुहुन्छ। के यो एक अभिनव विकल्प जस्तो देखिदैन?
बेडहरू जुन भित्तामा लुक्दछ
क्षैतिज तह बिस्तर ...
स्मार्ट बेट मानक ...
स्मार्ट बेट बेसिक बेड ...
परिवर्तनीय फर्नीचर अधिक फेसनशील भइरहेको छ। यदि हामीले देख्यौं कि कसरी एउटा ओछ्यान छतबाट तल झार्न सकिन्छ, अब हामीसँग अर्को आधारभूत अंश बाँकी छ। हामी पर्खालमा लुकेका बेडका बारेमा कुरा गर्दैछौं। किनभने यस तरिकाले हामी अन्तरिक्षको आदर गर्न जारी राख्दछौं, जबकि हामी फर्निचरको एउटै टुक्रामा अनेक विकल्पहरू दिनेछौं।
जब हामीaको कुरा गर्छौं भित्तामा तह पल्टफर्निचरको ठूलो टुक्रा दिमागमा आउँछ जुनबाट हामी हाम्रो विश्राम क्षेत्र हटाउन सक्छौं। यो कस्तो छ! हामी देख्न सक्छौं कि कसरी अलमारी वा साइडबोर्डमा recessed प्यानल समावेश हुन सक्छ जसले ओछ्यानमा नै नेतृत्व गर्दछ। तथाकथित हाइड्रोलिक प्रणाली हाम्रो छनौटमा उपकरण घटाउने र बढाउनको लागि जिम्मेवार एक हो। आज, हामी यो पनि देख्न सक्छौं कि विशिष्ट बैठक कोठा फर्नीचरलाई ओछ्यानमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। धेरै जसो केसहरूमा तिनीहरू पूर्ण ध्यान नखोल्छन्। आश्चर्यचकक कारक तपाईंको पाहुनाहरूको अनुहारमा स्थापित हुन्छ जब उनीहरूले देख्छन् कि तपाईंले बस्ने कोठालाई आरामदायी कोठामा रूपान्तरण गर्नुभयो!
के Ikea को खाट छ कि लुक्छ?
जब हामी सोच्दछौं सस्तो फर्निचर किन्नुहोस्, Ikea स्टोर हो जुन सँधै दिमागमा आउँछ। तसर्थ, यो भन्नु पर्दछ कि यदि तपाईं ओछ्यानहरू लुकाउन खोज्नुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो नजिकको स्टोरमा पनि फेला पार्नुहुनेछ। तिनीहरूसँग एक सरल मोडेल छ, तर एकदम व्यावहारिक पनि। तपाईं राम्रो सेतो वार्डरोबको मजा लिन सक्नुहुन्छ, जहाँबाट 90 ० × २०० ओछ्यान बाहिर आउँनेछ। निस्सन्देह, यो आधारभूत विकल्प हो तर समान समयमा उत्तम हुन्छ ताकि प्रश्नमा भएको ओछ्यानमा फ्ल्याट वा सानो अपार्टमेन्ट अधिकार हुँदैन।
लुकेका ओछ्यानहरू कहाँ राख्ने?
हामी हेर्दै आएका छौं, त्यहाँ धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ लुकेका बेडहरू राख्ने।
बैठक कोठा: जब हामीसँग सानो घर छ, हामीले लुकेका बेडहरू कहाँ राख्ने भनेर सोच्नु पर्छ। उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक बैठक कोठा हो। पहिले, किनभने सोफा ओछ्यान तिनीहरूले हामीलाई आरामको विकल्प दिन्छन्, समान रूपमा कार्यशील तर सँधै लुकाइएको फर्नीचरको एउटा टुक्राको लागि रोज्नु भन्दा उत्तम के हो। तसर्थ, टिभी फर्नीचर एक मुख्य हो। त्यस्तै ठूला साइडबोर्डले अरू केहि लुकाउन सक्छ।
युवा कोठा: यदि हामी पहिले नै कोठामा खाली ठाउँ चाहिन्छ भने युवा वा बच्चाहरू, डबल। यसैले यस प्रकारको फर्निचरको एक टुक्रा स्थापना गर्न लायक छ र यसले यसको डबल प्रकार्य गर्दछ।
अध्ययन: दिन को लागी यो तपाइँ हुन सक्छ काम वा अध्ययन को स्थान। यस तरीकाले तपाईं सबै पुस्तक वा कागजातहरू क्रमबद्ध गर्न ठूलो bookcases वा फर्नीचर द्वारा घेरिएको छ। तर राती, तिनीहरू एक तह पलंग को रूप मा आफ्नो समारोह हुनेछ।
कुनै श doubt्का बिना, लुकाउन-ओछ्यान बेड वा तह पलंग सबै भन्दा राम्रो विकल्प मध्ये एक हो, दुवै व्यावहारिक र मूल। यस तरीकाले हामीले हाम्रो घर फर्निचरले भरिएको देख्नुपर्दैन। के तपाईंले पहिले नै एउटा निर्णय गरिसक्नुभयो?
बेडका केही मोडेलहरू जुन लुक्छन्
साना घरहरूमा राख्नुहोस् ओछ्यान धेरै ठाउँ नलिई जटिल छ। यो समस्या हुनबाट जोगिन, विभिन्न फर्निचर घरहरूले समाधान खोज्नका लागि आफ्ना डिजाइनरहरू नियुक्त गरेका छन्।
ब्रान्ड Daccrarages, दिनको समयमा र सानो खाली ठाउँका लागि उत्तम ओछ्यानहरू सिर्जना गरेको छ र प्रयोगमा नहुँदा तिनीहरू अत्यन्त आरामदायी संयन्त्रको माध्यमबाट हुर्काइन्छन् र छतमा राखिन्छन्, जसबाट बेड बाधाबिना खुला हुन्छ। आवश्यकताहरूको आधारमा यसलाई फरक-फरक ठाउँमा राख्न सकिन्छ र जब यो कम गरिन्छ, केही खुट्टाहरू हटाइन्छन् ताकि यसको स्थिरता ठूलो हुन्छ। यसको फाइदा यो छ कि यो छतमा "भण्डार गरिएको" छ ओछ्यानमा विभिन्न लुस प्वाइन्टहरूको स्थापनाको लागि धन्यवाद यो धेरै उपयोगी प्रकाश स्रोत बन्छ।
त्यहाँ अन्य सस्ता पनि छन्, तर कम नवीन विधिहरू, उदाहरणका लागि मोडेल मर्फी युरो कम्प्युटर ब्रान्ड ओछ्यानमा आधुनिक मर्फी बेडहरू बिहान एकैपटक हराउँछ जब हामी बिहान उठ्छौं यसको ठाउँमा शेलफहरू सहित एक उपयोगी र आरामदायक डेस्क छोड्दछौं। कसैलाई थाहा छैन कि पछाडि एक फराकिलो फराकिलो पछाडि छ यदि तपाईं आफैले आफैंलाई बताउनु हुन्न भने। यसको ओछ्यान र आकारको आधारमा फरक मोडेलहरू छन्।
यस ब्रान्डको अर्को मोडेल आधुनिक मर्फी बेडहरू यो ओछ्यानमा राखिएको छ जब एक आरामदायक आर्म चेयर सुविधा छ ताकि तपाईं दिन को समयमा पूर्ण गर्न को लागि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। कसले कल्पना गर्छ कि त्यो रातको ओछ्यान छ कि?
हामी सँधै जान सक्दछौं तह पलंग अधिक क्लासिक जब तिनीहरू टाढा राखिन्छन् तिनीहरू एक साधारण वार्डरोब जस्तो देखिन्छन्। हामी उनीहरूलाई पक्का बेड वा एकल वा डबल बेडको विकल्पमा पनि फेला पार्न सक्छौं।
छविहरू: leblogdeco, फ्लाइंगबेडहरू, decoraciondelacasa, camag.es, Costco.co, tocamadera.es
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » शयनकक्षहरू » बेडहरू जुन लुक्छ
म फोल्डिंग बेडमा रुचि राख्छु 1 म यसको मूल्य जान्न चाहान्छु भन्यो
पनि सोफाबेड २ को मूल्य
जवाफ दिनुहोस् म फोल्डिंग बेडमा इच्छुक छु 1 म मूल्य जान्न चाहान्छु
म दुई सिटरको ओछ्यानको मूल्य जान्न चाहन्छु र त्यो बन्द हुँदा सोफा रहन्छ
म यी ° ० फोलिंग बेडहरू कहाँ पाउन सक्छु जुन क्याबिनेट जस्तो देखिन्छ ???? यसको मूल्य के हो र १. places स्थानहरूमा अवस्थित छ
मीलाग्रोस मोरेनो पेरेज भन्यो
म छतमा जान्छु भनेर ओछ्यान कहाँ किन्न सक्छु र यसको मूल्य कति छ? जवाफ जरुरी छ। धन्यबाद।
MIlagros Moreno पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
ओछ्यान बेडअपबाट हो र यसको मूल्य मापन, फिनिश र सामानका आधारमा भिन्न हुन्छ। तपाईं मा उद्धृतको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ http://www.bedup.fr/
नमस्कार, शुभ रात्री, यदि तपाई मलाई कोठाको जस्तो देख्ने बunk्क बेडको लागत बताउन को लागी दयालु हुनुहुन्छ भने र यदि त्यहाँ एउटा मात्र मोडेल छ कि भनेर जान्नका लागि मात्र त्यहाँ दुईवटा एकल छन् र तिनीहरू छुट्टै कोठरीको रूपमा भण्डार गरिएको छ। मेरा छोरीहरू र ठाउँ सानो छ। कुरेनाभाका मोरेलोसको शिपिंग
कन्भर्टेबल बन्क बेडको मूल्य लगभग € २€०० हो
मार्टा लोपेज भन्यो
नमस्ते! म अन्तिम एकल डबल बेडको मूल्य जान्न चाहन्छु, जुन एक साधारण सेतो वार्डरोब हो। म मापन जान्न चाहान्छु, यदि यसमा गद्दा समावेश छ, यदि त्यहाँ अधिक रंगहरू छन्, र मूल्य।
मार्टा लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
सेलेक्स वा एल्मेनटमा तपाईं यस प्रकारको साधारण तह बेडहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ओछ्यान विशेष गरी म तिमीलाई भन्न सक्दिन कि कसले यसलाई हस्ताक्षर गरे किनभने प्रविष्टि एक सहकर्मीद्वारा लेखिएको थियो
नमस्ते, म सेतोमा आधारभूत तह डबल बेडको मूल्य जान्न चाहन्छु, कृपया।
म एउटा ओछ्यानमा रूचि राख्छु जो एउटा आर्म चेयर बन्न जान्छ: «आधुनिक मर्फी बेडहरू», म नगद र कार्डमार्फत मूल्य जान्न चाहन्छु।
मारिया डे फातिमा नोगुइरा रामोस भन्यो
शुभ रात्री, म लुकेको ओछ्यानमा जान चाहन्थें, म कसरी अधिक जानकारी, आकार, र,, मूल्य पत्ता लगाउन सक्छु? धन्यवाद
मारिया डे फातिमा नोगुइरा रामोसलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते! म सोफा र शेल्फको साथ ठाडो रूपमा डबल बेड तह मोड्ने कुरामा जान्न चाहन्थें। धन्यबाद
प्रिस्कालाई जवाफ दिनुहोस्
Chus VD भन्यो
म म्याड्रिडका दिशा जान्न चाहन्छु, जहाँ म यस प्रकारको फर्निचर देख्न सक्छु। धन्यवाद
Chus VD लाई जवाफ दिनुहोस्
कति ओछ्यानमा सुरक्षित गरिएको छ र यो एक डेस्क हो। धन्यबाद
मकारेना ग्यालार्डो भन्यो
म मूल्यहरु जान्न चाहन्छु र कहाँ खोज्न जान्छु
मकारेना ग्यालार्डोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, म ओछ्यानको लागि बजेट खोज्दै छु जुन छतमा जान्छ, म म्याड्रिडमा बस्छु।
लिट्जानलाई जवाफ दिनुहोस्
म मूल्य जान्न चाहान्छु र जहाँ म छानामा लुकेका खाटहरू हेर्न सक्दछु
Sandra abella भन्यो
मैले तिनीहरूलाई कहाँ भेट्टाउँछु, म बोगोटा, कोलम्बियामा छु
Sandra Abella लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई डबल भित्तामा एक तह पल bed चाहिन्छ
फर्नीचर को रूप मा
म अर्जेन्टिनामा बस्छु, म आफ्नो छानामा चढ्ने ओछ्यान किन्न चाहन्छु। मलाई कम्तिमा संयन्त्र चाहिन्छ र सबै csma राम्रो हुन्छ। म तपाईको जवाफलाई पर्खिरहेको छु धेरै धेरै धन्यवाद
YEMIN CECILIA GARCÍA CORREA भन्यो
कृपया उद्धरण बेड
YESMIN CECILIA GARCÍA CORREA लाई जवाफ दिनुहोस्
जीसस कास्टिलो लारा भन्यो
के तपाईं मलाई पार गर्न सक्नुहुनेछ वा मलाई भित्तामा निर्यातयोग्य ओछ्यानको मूल्य दिन सक्नुहुन्छ? म साल्तिलो कोहुइला मेक्सिकोमा बस्दै थिएँ र म यस ठाउँको भित्तामा यस प्रकारको पलंगमा बेच्न चाहान्छु। REGARDS
जेसिस कास्टिलो लारालाई जवाफ दिनुहोस्
म हटाउन सकिने क्याबिनेटहरूसँग बिस्तरहरू मन पराउँछु, जहाँ म तिनीहरूलाई ECUADOR बाट छु
CHARITO लाई जवाफ दिनुहोस्
हेक्टर MACKINTOSH भन्यो
हेक्टर MACKINTOSH लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, म ओछ्यानको मूल्य जान्न चाहन्छु जुन छतबाट झर्छ, र रातो सोफा पछाडि आउने एउटा, धन्यवाद
एलाज्नेलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई ओछ्यान चाहिन्छ जुन भित्तामा लुक्छ र कम्प्यूटर टेबलमा परिणत हुन्छ
Deymis लाई जवाफ दिनुहोस्
अद्भुत !!! म डिजाइनर हुँ। म कसरी तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्छु ???
इरचकालाई जवाफ दिनुहोस्
म जान्न चाहन्छु तिनीहरू कहाँ अवस्थित छन् र पर्खाल तर्फ डबल फोल्डिंग बेडको लागत
रुबेन एंटोनियो एगुलर भिल्ला भन्यो
मॉडलहरू, फ्यान्स्ट्याक म केहि लुकाइएको खाटहरूमा रूचि राख्छु जहाँ पसलहरू लक छन्, म भेराक्रुज, म्याक्सिकोमा छु, म उनीहरूलाई माया गर्छु
रुबेन एंटोनियो AGUILAR भिल्लालाई जवाफ दिनुहोस्
स्पेनमा, छानामा जानको लागि बेडको लागि विभिन्न समाधानमा विशेषज्ञता प्राप्त एक कम्पनी छ। यसलाई Tu Lecho al Techo भनिन्छ र यो म्याड्रिडमा अवस्थित छ।
र thatहरू जुन हरियोसँग मिल्दछ